Wararka - XOGTA UGU WEYN EE TIEJIA SI AAD UGU ARAGTID CASHARKA UGU HOREEYA EE MAGAALOOYADA ISTICMAALAYA
Sanadihii la soo dhaafay, wax soo saarka qodista Shiinaha ayaa soo martay koror xoog leh, dagaalka loogu jiro saamiga suuqa ayaa durba bilaabay. Sida laga soo xigtay xogta iibka qodista ee Shirkadda Dhismaha Mashiinka Dhismaha ee Shiinaha, saamiga suuq-geynta suuq-geynta gudaha ee 2019 wuxuu ahaa mid aad u sarreeya oo ah 62.2%, halka calaamadaha Japan, Yurub, Ameerika iyo Kuuriya ay ahaayeen 11.7%, 15.7% iyo 10.4% siday u kala horreeyaan Waa la arki karaa in soosaarka ay ugu wacan tahay hagaajinta heerka, hagaajinta nidaamka adeegga iibka kadib, iyo siyaasada iibka mudnaanta leh, noocyada gudaha ayaa kor u kacay waxayna noqdeen xulashada isticmaalayaasha badankood.
Haddaba waa maxay qaabka saamiga suuqa ee noocyada gudaha?
Marka loo eego tirakoobka ururka, saamiga suuqa ee Sany, Xugong, Liugong, iyo Shandong Lingong sanadka 2019 waxay ahaayeen 26.04%, 14.03%, 7.39%, 7.5%, iyo 7.15%, siday u kala horreeyaan. Marka laga eego aragtida xogta, Sany wuxuu kujiraa rubuc ka mid ah suuqa qashin qubka, falanqaynta iibka kaligeed shaki la'aan waa guuleystaha ugu weyn suuqa gudaha, waxaana ku xiga noocyada sida XCMG iyo Liugong. Laga soo bilaabo Janaayo ilaa Juun 2020, Sany iyo XCMG wali waa labada ugu sareeya iibinta qodista guryaha. Waxaa xusid mudan in Zoomlion uu sidoo kale ku riyaaqay xawaare xoog leh oo horumarineed. Qiyaasta iibka ee bishii Juun ayaa kaalinta shanaad ka gashay noocyada guryaha.
Raadinta qiimeynta noocyada qodista guryaha ee isticmaalayaasha dhammaadka
Marka, saamiga suuqa ma ka tarjumi karaa aqoonsiga astaanta maskaxda dadka isticmaala? Si taas loo gaaro, Tiejia Forum waxay dhawaan biloowday sahan ku saabsan "Darajada Sumcadda Qodista Guryaha", iyadoo ku dhowaad 100 isticmaaleyaasha dhammaadka ahna ay ka qaybgaleen oo ay muujiyeen ra'yigooda. Xog uruurinta isticmaaleyaasha ee Forum A. The
Natiijooyinka sahaminta waxay muujinayaan in ku dhowaad 50% dadka isticmaala ay ku qiimeeyaan Sany inuu yahay nooca ugu horreeya ee qodista guryaha, taas oo muujineysa in muggeeda iibku u qalmo magaceeda. Sany, Liugong, Xugong, iyo Shandong Lingong ayaa ah afarta nooc ee ugu sareeya ee leh feejignaan badan isticmaalaha. In ka badan 90% dadka isticmaala ayaa ku qiimeeya afarta ugu sareysa, taas oo asal ahaan la jaan qaada xogta wadaagista suuqa.
Iyadoo la tixgelinayo sida isticmaaleyaasha culeyska ahi ay fiiro gaar ah u leeyihiin noocyada gudaha
Noocyo kala duwan ayaa leh faa'iidooyin wax soo saar oo kala duwan. Kadib, marka loo eego miisaanka kala duwan ee yar yar, dhexdhexaad, iyo weyn, intee in le'eg ayay dareenka isticmaalayaashu siinayaan astaamaha gudaha?
Xogta maktabadda wax soo saarka ee Tiejia badanaa waxay ka timaadaa tirada raadinta ay sameeyeen isticmaaleyaasha. Waa la arki karaa in tan iyo Sany, Xugong, Liugong, Shandong Lingong iyo noocyo kale ay caan ku yihiin adeegsadayaasha, adeegsadayaashu waxay mudnaanta siin doonaan raadinta xuduudaha qalabka la xiriira marka la iibsanaayo mashiin cusub, iyo iibsigii ugu dambeeyay Jawaabta go'aan qaadashada waa sidoo kale waafaqsan saamiga suuqa:
1. Markaad fiiriso dareenka isticmaalaha qotodheeryada yaryar, kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn, siday u kala horreeyaan, SANY ayaa ku jira safka hore, mar labaadna waxay xaqiijineysaa booska hoggaamineed ee gudaha;
2. Ujeeddada adeegsadayaasha qodidda yaryar Darajada qodista ayaa si aad ah uga sarreysa tan dhexe iyo kuwa waaweyn. Tan waxaa u sabab ah kororka ballaaran ee shuruudaha dhismaha sida isbeddelka bulshooyinkii hore, istiraatiijiyado dib-u-nooleynta miyiga, wareegga dhulka iyo beero beerista, iyo faa'iidooyinka laga helay qoditaannada yaryar, sida yar iyo dabacsanaan, isu-gudbid xoog leh, iyo kordhinta qiimaha shaqaalaha. Waxay sidoo kale dardar gelisay baahida suuqa ee qodaalka yar.
Markaad fiirineyso isbeddelka isbeddelka ee dareenka isticmaalayaasha ee ku saabsan miisaanka kala duwan ee ka yimaada heerka ilaalinta
Heerka ilaalinta ayaa ah mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee lagu qiimeeyo qiimaha sumadda. Dareenka isticmaalaha ee taleefanka gacanta labaad wuxuu si toos ah uga tarjumi karaa heerka ilaalinta astaanta. Waxaan doorannaa afarta magac ee gudaha ee Sany, Xugong, Liugong, iyo Shandong Lingong oo dadka isticmaala ay fiiro gaar ah u leeyihiin. Marka laga eego aragtida taleefanka labaad ee gacanta, waxaan ku eegeynaa dareenka isticmaalaha ee qotomayaasha kaladuwan ee kala duwan iyo isbeddelladooda isbeddellada:
marka loo eego xogta taleefoonka labaad, Dareenka mashiinnada cusub waa isku mid, dareenka dadka isticmaala ee qodidda yarna way ka badan tahay tan qoditaanka dhexdhexaadka ah iyo qodidda ballaaran, waxayna ku haysay qaab deggan sanadkii la soo dhaafay. Laga soo bilaabo Diseembar 2019 illaa Febraayo 2020, saameynta Sanadka Cusub ee Shiinaha iyo hakinta cudurka faafa, dareenka isticmaalayaasha ee qotominta culeysyada kala duwan ayaa hoos u dhacay. Dhexdooda, xogta qodista yaryar ayaa si weyn hoos ugu dhacday. Waxaa saameyn ku leh dib u bilaabida shaqada laga bilaabo Maarso ilaa Abriil, dareenka ayaa hoos u dhacay. Dib-u-soo-celin muhiim ah, hoos u dhac yar ka dib May ayaa caadi noqotay, guud ahaanna wax yar ayey ka sarreysaa heerkii sanadkii hore.
Isbeddelkani wuxuu si gaar ah ugu muuqdaa xogta Sany, taas oo la xiriirta tirada badan ee qalabka suuqa iyo qiimaha weyn ee xogta.